“မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေ၊ ကဗျာဆုပေးပွဲ နဲ့ မြန်မာ့ ဂဇက် ရွာသူားများတွေ့ဆုံပွဲ”MG | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » “မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေ၊ ကဗျာဆုပေးပွဲ နဲ့ မြန်မာ့ ဂဇက် ရွာသူားများတွေ့ဆုံပွဲ”MG
“မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေ၊ ကဗျာဆုပေးပွဲ နဲ့ မြန်မာ့ ဂဇက် ရွာသူားများတွေ့ဆုံပွဲ”MG
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Jan 6, 2014 in Best Web Awards, Entertainment, Myanmar Gazette | 52 comments
၂၀၁၄ နှစ်သစ်မှာ ရွာသူရွာသားအပေါင်း မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်ဝပြီး စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ လိုရာဆန္ဒများနဲ့ ပြည့်ဝကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ….
အင်း..ဘာလိုလိုနဲ့ အသက်က တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ကြီးလာတော့…မှတ်ဥာဏ်တွေလည်းသိပ်မကောင်း အရေးထဲ..ပင်စင်ကမယူနိုင်သေးတော့ နေ့စဉ်အလုပ်ကလည်း မိုးလင်း၊မိုးချုပ်သွားနေရသေး….အသက်ကြီးမှအိမ်ထောင်ကျတော့ လူကအိုလှပြီ..သားသမီးတွေက ငယ်ငယ်လေးတွေ…(အူးကျောက်စ် တွေ့ရမဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့) အတူတွဲသွားရင် မသိသူတချို့က မြေးအဖိုးတွေ လမ်းလျှောက်ကြတယ်ထင်တာ.. တစ်ခါကပေါ့..ကျုပ်ကားစုတ်လေး ဓါတ်ဆီသွားဖြည့်တော့…ကျုပ်ကကားပေါ်က.. သားက ဆီဆိုင်ရောက်တော့ ပိုက်ဆံလေးကိုင်၊ ကောင်တာပြေးပြီး ဆီဘောက်ချာသွားဖြတ်၊ ပီးတော့ပြန်ပြေးလာပြီး..ဘောက်ချာကို ပန့်ကိုင်ကိုပေး..ပေးရင်းနဲ့ သူကပြောလိုက်သေး.. `ဦး..ဆီပြည့်ပြည့် ထည့်နော်´ တဲ့…သားက ၃နှစ်ပဲရှိသေးတာ…အဲဒီတော့ ပန့်ကိုင်တဲ့ ဘိုးတော်(ကျုပ်လောက်ရှိပါတယ်ဗျာ)က..`ဟာ..အဘမြေးလေးကလိမ္မာလိုက်တာ´တဲ့… တောက်စ်..သေရော ကားဆီဖြည့်ပြီးလို့ သားကားပေါ်ပြန်တက်လာတော့…ရယ်ပြီးကျုပ်ကိုပြောတယ်… `ဖေကြီးကို ဒါကြောင့်ပြောတာ…ဆံပင်ဆေးဆိုးပါလို့´…
ဟီး..ဟုတ်သားပဲ ကျုပ်ဆံပင်တွေကလည်း ၈၀%လောက်ဖြူနေပြီကိုး…`အေးပါသားရယ်´လို့ပဲ ကျုပ်ပြန်ပြောရင်း..ရယ်နေလိုက်တယ်….. အဲဒီလို အိုကြီးအိုမ မိသားစုအရေးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေသူ ကျုပ်ဆိုတဲ့ `ကြီးမိုက်´ ကို မန်းဂဇက်ဆိုလား..မြန်းဂဇက်ဆိုလား..ဟို..ဟို..ဒေါင်းတွေမွေးပြီး…ဒေါင်းဥကိုသေးတယ်ပြော ပြောနေတဲ့ လော့ကျနေတဲ့ အိမ်ကြီးမှာနေသူ၊ သဂျီး အူးခိုင်ဆိုသူ ကမြင်းကျောထပြီးထောင်ထားတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်က မိတ်ဆွေတစ်ချို့က အတင်းရော..အဓမ္မကြီးရော…ကျုပ်ကို ဖတ်ရွေးငှက္ကဋ္ဌ ခန့်ကြပြန်ပါရောဗျာ…….. အဲဒီမှာ ပြဿနာစတာပဲ…အားနာလို့လက်ခံလိုက်ပေမဲ့…ဖင်မနိုင်ပဲ ချဉ်ပေါင်ဟင်းစားသလို ဖြစ်ပါလေရော…ဒါပေမဲ့ ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း…တစ်ခုခုတာဝန်ရှိပြီဆို… လက်မလျှော့တတ်တဲ့ အကျင့်ကရှိနေတော့… မအားတဲ့ကြားကပဲ…ဂဇက်ရွာ(တစ်ချို့လည်းမြို့လို့ဆိုကြရဲ့)ထဲက ကျုပ်နဲ့ရင်းနှီး၊ ခင်မင်ဖူးတဲ့သူတွေကို တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်အသုံးချပြီး….. ကိုယ်ကိုတိုင် ဘာမှမလုပ်ပဲ ဖတ်ရွေးငှက္ကဋ္ဌ လုပ်လာတာ…အင်း..ခုဆို..၂၀၁၃ ဒုတိယ နှစ်ဝက်အတွက် “မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေ၊ ကဗျာဆုပေးပွဲ နဲ့ မြန်မာ့ ဂဇက် ရွာသူားများတွေ့ဆုံပွဲ” ကို..သုံးကြီမ်မြောက်ကျင်းပဖို့ ရက်တွေနီးလာပြန်ပါပကော။ ဘာပဲပြောပြော..ဒီဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကြီးဟာ….
လေ့လာစောင့်ကြည့်မှုများစွာ – – – – – – – –
အဲဒီလို များစွာတွေကိုကျော်ဖြတ်ရင်း ချီတက်လာတာ….
ခုဆိုရင် တစ်နှစ်ခွဲဆိုတဲ့ အချိန်ကို အောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်လာနိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီ….
ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ဆုပေးပွဲအခန်းအနားကို ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀)ရက်နေ့ မှာ ကန်တော်ကြီးထဲက P3 စားသောက်ဆိုင်မှာကျင်းပခဲ့ကြပြီး…. ဒုတိယအကြိမ် မန်းဂဇက်ရွာသူရွာသားများတွေ့ဆုံပွဲ နဲ့ ဆုပေးပွဲကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဂျူလိုင်လ (၂၁) ရက်နေ့ မှာ ကန်တော်ကြီးထဲမှာပဲ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်…
ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲမှာတော့ ထူးထူးခြားခြား မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆုရစာမူများကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ် (အဲဒီအမှတ်တရ စာအုပ်ကို ဒီတစ်ခေါက်တွေ့ဆုံပွဲမှာလည်း ရယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်)
အဲဒီလို ချိနဲ့နဲ့ လှုပ်လီ လှုပ်လဲ့ ချီတက်လာခဲ့ကြတာ…
အခုဆိုရင် တတိယအကြိမ်မြောက် “မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေ၊ ကဗျာဆုပေးပွဲ နဲ့ မြန်မာ့ ဂဇက် ရွာသူားများတွေ့ဆုံပွဲ” ကို ကန်တော်ကြီးထဲက ကျင်းပနေကျဆိုင်မှာပဲ ကျင်းပသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါကြောင်း နဲ့ ရွာသူ ရွာသားများအားလုံး(တစ်ယောက်မကျန်) ပျော်ရွှင်စွာ ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားခင်မင်စွာနဲ့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ဗျာ….
မြန်မာ့ဂဇက် အဖွဲ့ဝင်များ တတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံပွဲ
နေ့ရက်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက်
အချိန်။ နံနက် ၈ နာရီ မှ ၁၁ နာရီခွဲ
နေရာ။ ကန်တော်ကြီး ကရ၀ိတ်ဥယာဉ်ကမ္ဘာ၊ ရှန်တီစားသောက်ဆိုင်
တက်ရောက်မည့်သူများ ကွန်မန့်လေးနဲ့ စာရင်းပေးကြပါနော….. u
တွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်မည့်သူ စာရင်း
မင်္ဂလာစုံတွဲ (ကျောက်စ် + နှင်းစ်)
ဦးကြီးမိုက် (ခ) ကြိုက်မီး … မသေချာဟု ပြော*
ဦးဦးပါလေရာ … မလာဘဲ မနေနိုင်၍ လာမည်ဟု ပြော*
အန်တီဒုံ … စိတ်ကောက်ပြေသွား၍ လာမည်ပြော*
အန်တီမားမား … မသေချာ ပြောပြီး ကျိမ်းသေပြီဟု ပြန်ပြော*
အန်တီဝေ … လာဖြစ်ဖို့ သေချာဟု ပြော*
ဦးပီချိုကြီး … မိသားစုလိုက် လာမည်ဟု ပြော*
မဝေါင်း (ခ) မဝိုး … လာမည်ဟု ပြော*
ကိုကြောင်ဝတုတ် … လာမည်ဟု ပြော*
ကိုရွှေတိုက်စိုး … လာရင် သမီးလေးပါ ခေါ်လာမည်ဟု ပြော*
ကိုဆောရိုး … လာမည်ဟု ပြော*
ဦးအံစာတုံး … လာမည်ဟု ပြော*
ဒေါ်မွန်မွန် … လာမည်ဟု ပြော*
ဦးစွယ်တော် .. လာမည်ဟု ပြော*
ဂါးနဲ့ဂီ … လာမည်ဟု ပြော*
ကပ္ပိယသာဒင် .. လာချောင်းမည် ပြော*
မမွန်းပူအမ် … လာဖို့ ကြိုးစားမည် ပြော*
မနောဖြူလေး … လာဖို့ ကြိုးစားမည် ပြော*
မရွှေအိ … ခဏ လာမည် ပြော*
မနိုဗွီ … လာဖို့ ကြိုးစားမည် ပြော*
မောင်ဘလှိုင် … လာမည်ဟု ပြော*
ဒေါ်ကေဇီ … စပွန်ဆာရှိ လာမည် ပြော*
ကိုအောင်မိုးသူ … လာမည်ဟု ပြော*
has written 94 post in this Website..
မစပ်သောငြုပ်သီးတစ်တောင့်ပါ THAKHIN CJ #2152011 (5/2/16)
View all posts by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် →
ကျော် ပထမဆုံး စာယင်း ပေးဘာဒယ် …
ဒါမယ့် … ဆုလေး တစ်ဆုလောက်တော့ အားနာပါးနာနဲ့ ပေးဂျဘာ …
မပေးဘူးဆိုယင်ဒေါ့ လာဘူးဗျဲစ် … ဟွန့် ..
သူ + အနော်..
ကျွန်တော် ဖက်ဖက်ကက် လာပါ့မယ်ခင်ဗျ…
တားလဲ လာမယ် အူးမိုက်
တွေ့ ဆုံပွဲ လုပ်မယ့် ရက်မှာ
မန်းလေး ရောက်နေမှာမို့ 
စာပေဆုရော..ကဗျာဆုရောပေါင်းရင်..အားလုံး ဆုရသူ (၁၇)ယောက်တောင်..
ဆုရှင်တွေတော့ နိုင်ဂျံဂါးရောက်နေသူမှလွဲ၍ မဖြစ်မနေလာကြစေချင်ပါသည်
ဥက္ကဌကြီးက သီချင်းဆိုပြပါမြီတဲ့.. လာကြနော်..
Ko chogyi says:
ရွာသူားများနှင့် အတူတကွ တွေ့ဆုံပျော်ပါးလိုပါသော်လည်း…..
ဥက္ကဌကြီး ဘရာသာမိုက် ကို အားပေးချင်ပါသော်လည်း ……….
မထင်မှတ်သော ကိစ္စများပေါ်လာတတ်ပါသဖြင့် ……….
Swal Taw Ywet says:
ရွာ့ကွပ်ပျစ်ကြီးတောင် ကြိုရွှေ့ပေးထားလိုက်ဦးမယ်၊ဟေ ဟေ့။
( တစ်ယောက် ထဲသူများ မထိုင်ရ )။
ပွဲတက်ရန်၊ ကင်မရာခလုတ်နှိပ်ရန်…… အသင့်။
Swal Taw Ywet.
(မတော်..မဲပေါက်ခဲ့သော) အမျိုးသားများ.. တခြမ်းအဖော်မရှိပါက..
ကျုပ်ကတော့ မလာပဲ လုံးဝ လုံးဝ မနေနိုင်………..
ဖြူစိုင်း လူ says:
ကျော်ကတော့ လုံးဝ မလာနိုင်ပါကြောင်း
ရွာ ကွပ်ပျစ်မှာလို ကော်ဖီ ကို ၂ခွက် သောက်လို့ရလားဟင်။
ကျနော် ( တို့ ) က မနက် ၇နာရီကျော် ကတည်းက ရောက်နေမှာမို့၊ ဟီးးးးးးးးး
(တို့ ) ဆိုတာကို တလွဲတွေးမနေနဲ့ဦး၊ဥက္ကဌကြီးနဲ့အတူ အခန်းအနားပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ပါခင်ဗျ။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says:
လူစားလာတဲ့သူကို နွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုဧည့်ခံပါ့မယ် လို့ကတိပေးပါဂျောင်းးးး
ကပ္ပိယ သာဒင်​ says:
မနီးမဝေးက လာချောင်းကြည့်မယ် ။
မသေချာ . . . ဟုသာ
ပထမတစ်ခေါက်က လာဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်ခေါက်က မလာဖြစ်ခဲ့ပါ။ တတိယ တစ်ခေါက်ကိုတော့ ဆုံနိုင်အောင် ကြိုးစားပါဦးမယ်ရှင့်။
ရွာ့စီဂျေကြီး ကထူးဆန်း .. ကလဲ
အလှူ ကိုတော့ မှတ်မှတ်ရရ ထည့်ဝင်သွားပါတယ်…
အလှူငွေ ငါးသောင်းကျပ်တိတိ ဖြစ်ပါကြောင်း…..။
ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း
လက်ခုပ်တီးတာနော် .. တစ်ညိုးထင်နဲ့ …
ကေဇီ စားသလောက် တစ်နေ့ ငါးနပ်ကို တစ်ပတ်လောက်ကျွေးဖို့ရယ်။
လျှမ်း သလောက် လိုက်ပို့ပေးနိုင်တဲ့ စိတ်ရှည်ကြည့်ကောင်း ဒရိုင်ဘာချောချောလေးရယ် အချိန်ပြည့်ကားလေးရယ်။
နောက်ပြီး ပွဲမှာ ဝတ်ဖို့ ဝတ်စုံလှလှလေးရယ်။
ဗုံးမပေါက်မဲ့ ဟိုတယ်(ကြယ် ၅ ပွင့်လောက်) မှာ ၁ ပတ်စာတည်းခိုစားရိတ်လေးရယ်။
သများ ကို အဝေးကြီးကနေလာရလို့ သနားပြီး ပေးတဲ့ ဆု လက်ဆောင်လေးရယ်။
အဲဒါတွေ အကုန် စပွန်စာရရင် လာမယ် မိုက်မိုက်။
ဒါပဲနော်။ အဲဒါတွေအကုန်ရမယ်ဆိုပြီး လာမှ ဖနောင့်နဲ့ မပေါက်ရဘူးးး
ကျော့်မှာ အာကိုဂျီး ချောချောခန့်ခန့် တစ်ယောက် ချိဘာဒယ် ..
သူဂ မမကေဇီကို တိတ်တခိုး ဘောကျနေဒါဒဲ့ …
ကျော်က ကြားကနေ အောင်သွယ်တော် လုပ်ပေးမားလို့ … လာခဲ့မယ် ဆိုရင်ပေါ့ …
ဟိုလေ သဘောကျရုံဆို မလာနိုင်ဘူးလို့။
အဲဒီ ကုန်ကျစားရိတ်ကို သာ အရင် ပို့ပေးပါ။
ပြီးတော့တိတ်တခိုးသာဆက်ပြီး သဘောကျပါလို့ ပြောပေးပါ၊.
အော်..ကေဇီကဗျာလွတ် တစ်ယောက် တော်တော်လာချင်နေပုံပေါက်တယ်…
ဒီနှစ်တော့ မနော လာနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်ရှင့်။
အိုက်နေ့ အလုပ်နဲနဲများမှာမို့ ခဏတဖြုတ်လာဘာမယ်
ယခုနှစ်တွင် မလာရောက်နိုင်ပါ ။
ထို့အတွက် ရွာသူ ရွာသား အားလုံး အားအထူးတောင်းပန် ပါသည် ။
၁၁ ရက်နေ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးတိုတစ်ခုသွားရမယ်
လာမယ်ပြောပြီးမှ မလာဖြစ်မှာစိုးလို့ ….
လာဖြစ်လို့ သေချာသလောက်ရှိပါတယ် ..
အထူး လက်ဆောင် အနေနဲ့
ကျော်က နေပီးဒေါ့လေ …
အာဘွားကြီးကြီး ပေးသွားပါ့မယ်လို့ …
အား လုံး ကို အ နူး အညွတ် တောင်း ပန်ပါသည် ခင်ဗျား
ကျ နော် မ လာ နိုင် တာ % ပြည့် သေ ချာ သွား ပါ ပြီ။
ကိုပေါက် ဒီပွဲနဲ့ တစ်ကြိမ်မှမဆုံတာ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ…
ဖုန်း နဲ့ လှမ်း ပြီး နုတ် ဆက် ပါမည် ကျ နော့်  ကိုပြော ရ မယ့် အချိန် မှာ miss call ပေး လိုက် ပါ ခင် ဗျာ
ကိုပေါက် မလာနိုင်ဘူးဆိုတာ စိတ်မကောင်းဘူး။
ဒီတခါ ဖုန်းခေါ်ဖို့ သတိရကြပါ။
တွေ့ဆုံပွဲမှာ ကိုကျော်စွာခေါင်ရဲ့ Viber ကိုခေါ်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားပါမည်။
aung moethu says:
ကျတော် မောင်အောင်မိုးသူ လာပါမယ် ခင်ဗျ
အနီချင်းပြိုင်နိုင်မတဲ့လား ပိုမိုရှင်းလက်ဆောင်ရှင် KZ တစ်ယောက် ဤပွဲကိုတက်ဖြစ်ခဲ့ရင် လက်ဆောင်ဆုပေးရန်အတွက် ကျွန်တော်မဖြစ်မနေလာဖြစ်မှာပါ။ အခုတော့ ထိုဆုရှင်က မန်း ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှ ယူမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် သူမ ပြန်အလာကို စောင့်နေစဲပါ။
အနီချင်းပြိုင်နိုင်မတဲ့လား ပိုမိုရှင်းနှစ်သိမ့်ဆုရသည့် လုံမလေးမွန်မွန်ကိုတော့ ပထမဆုပေးဖြစ်ပြီးမှ ပေးရန်ရည်ရွယ်ထားပါကြောင်း မေ့နေတာမဟုတ်ပါကြောင်း ထပ်လောင်းပြောပါရစေ။
ဥက္ကဌကြီး ဦးကြီးမိုက်ရေ ကျွန်တော်မတက်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းပို့ပါ၏။
ချည်ပြီး ချုပ်ပြီးပါလား ခခ။
။ဒေါ်ကေဇီ … စပွန်ဆာရှိ လာမည် ပြော* လို့ပဲရယ်။
ဒီတစ်ကြိမ်လည်း အလွမ်းတွေကလွဲပြီး လူတော့မလာနိုင်သေးပါ။ ဦးကြောက်စ်တို့မင်္ဂလာစုံတွဲကို တွေ့ချင်မြင်ချင်လွန်းရက်နဲ့ မလာနိုင်သေးတဲ့ကိုယ့်အဖြစ်။
( ကျောက်စ်+နှင်း)မင်္ဂလာမောင်နှံ နှင့် အဘဆွေပူးပေါင်း၍ အကျွေးအမွေးအစီစဉ်အတွက်
အလှူငွေ နှစ်သိန်းကျပ်တိတိ လှူဒါန်းပါတယ်ဗျား…
“ဒီလင်ဒီမယား အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းသင်း၍ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ”
လူပျိုကြီး အဘဆွေလည်းမြန်မြန်အစွံထုတ်၍ ကိုကျောက်စ် တို့နောက်အမှီလိုက်နိုင်ပါစေ..
အလှူငွေငါးသောင်းတိတိထည့်ဝင်ကူညီပါသော စီဂျေကြီး ကထူးဆန်းလည်းကျန်းမာ၍
ပွဲကိုမတက်ရောက်နိုင်သော်လည်း သြဇီမပြန်ခင် အလှူငွေ တစ်သိန်းတစ်သောင်းတိတိထည့်ဝင်သွားပါသော အဘဖေါတစ်ယောက်လည်းစိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ”……
ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား… လူပေါတွေ…
aye.kk on လေယာဉ်လက်မှတ်ကို ကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် သက်သာအောင် ၀ယ်ချင်လျှင်
Shar Thet Man on ရန်ကုန် Walking Tour
aye.kk on ရန်ကုန် Walking Tour
kai on အရောငျရငျ့မှတျတမျး – Bold News June 2019
Shar Thet Man on Learning to write in English (6) – Myo Kyaw Myint
kai on အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅
kai on အရောငျရငျ့မှတျတမျး – Bold News May 2019 မေ ၂၀၁၉
Shar Thet Man on ခွေးသား (၁)
Thint Aye Yeik on ခွေးသား (၁)
kai on ခွေးသား (၁)
Shar Thet Man (76356 Kyats )
monmon (62351 Kyats )
aungmoethu (61127 Kyats )
Foreign Resident (60249 Kyats )